कतारका यी क्षेत्रका श्रमिकलाई घर पठाउन सुरु, बिदाको तलब कति पाउछन ? - jagritikhabar.com
कतारका यी क्षेत्रका श्रमिकलाई घर पठाउन सुरु, बिदाको तलब कति पाउछन ?
निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई बिदामा राख्ने तयारी भएकाले सबैभन्दा बढी प्रभावमा नेपाली नै पर्ने सम्भावना छ ।
श्रम मन्त्रालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार कतारमा काम गर्ने नेपालीमध्ये निर्माण क्षेत्रमा १४.८ प्रतिशत, सवारी चालक र मेसिन अपरेटर ८.३ प्रतिशत, इले’क्ट्रिकल तथा मेकानिकल टेक्ने’सियन ८ प्रतिशत, सामान्य सेवामा ५६.८ प्रतिशत, सेवाजन्य काममा ७.९ प्रतिशत र अन्यमा ५.२ आबद्ध छन् ।
कतारी अधिकारीहरूसँग भएका भेटवार्तामा भने श्रमिक फिर्ता गर्ने विषयमा छलफल नभएको उनको भनाइ छ । ‘फिफा विश्वकपलाई ध्यानमा राखेर आउने दिनमा श्रमिक आपूर्ति नियन्त्रित गर्छौं भनेका थिए तर श्रमिकलाई फिर्ता गर्ने भन्ने विषय भने प्रस्ट बताएका थिएनन्,’ उनले भने । कतारले विश्वकपलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । सानो भूगोल भएको देशले २६ लाख श्रमिकसँगै एकै पटक १५ लाख पाहुना थपिँदा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर गृहकार्य गरिरहेको छ । कतारका होटलमा अहिले एक लाख ७५ हजार कोठा छन् । थप कोठाका लागि क्रुज परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ ।
खाडी क्षेत्रमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकको मामिलामा कार्यरत इक्विडियम अनुसन्धान केन्द्र, दक्षिण एसिया निर्देशक रामेश्वर नेपाल विश्वकपको पूर्वाधार खडा गर्न दिनरात खटिएका श्रमिकहरूलाई नै प्रतियोगिताकै बेला घर फर्काउनु गलत भएको बताउँछन् । स्वैच्छिक रूपमा फर्कन चाहनेहरूलाई पनि प्रक्रिया सहज हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘स्वदेश फिर्तीको विषय ऐच्छिक हुनुपर्छ, बाध्यकारी बनाइनु हुँदैन । विश्वकप सफल पार्न काम गरेका श्रमिकले टि’कट काटेर खेल हेर्छु भन्छन् भने पाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बिदामा पठाउने हो भने चार महिनाको तलब के हुन्छ ? यात्राको प्रबन्ध के हुन्छ ? यी विषय स्पष्ट हुनुपर्छ । एकै पटक बिदामा पठाउने नीति सानोतिनो तयारीले पुग्दैन ।’
विश्वकपलाई लक्षित गरेर बनाइएका आठमध्ये एउटा रंगशाला बनाउन काम गरेका मोरङका राकेश राईले विश्वकपका बेला आफूहरूलाई फिर्ता पठाउने खबरले दुःखी बनाएको बताए । अल रैयानस्थित एजुकेसन सिटी रंगशाला निर्माणमा संलग्न उनले भने, ‘म यसअघि रेलवे बनाउने काममा लागें, एजुकेसन सिटीमा पसिना बगाएँ । हाम्रै हातले बनाएको मैदानमा मेसी र रोनाल्डो खेल्न आउँदै छन्,’ उनले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘म आफैं पनि फुटबल भनेपछि हुरुक्क हुने मान्छे । तर, कतार सरकारले हामीलाई नै खेल हेर्न निषेध गर्न लागेको देखेर मन दुःखी छ, श्रमको अपमान यही होइन र ?